Azia Atsinanana · Mey, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsinanana · Mey, 2011
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Mey, 2011
Shina31 Mey 2011
Telo volana taorian’ny famonjàna, Li Tiantian, mpahay lalàna Sinoa dia nanoritsoritra tao amin’ny Twitter ny momba ireo mpanadihady azy nampiasa ny antsipirihan’ny tsiambaratelom-piainany mba hanaovana herisetra taminy. Volana vitsivitsy lasa izay, anjatony mahery ny mpahay lalàna momba ny zon’olombelona an-jatony, mafàna fo, mpanoratra ary mpanakanto no voasambotra na nenjehin’ny lalàna...
Afrika Mainty28 Mey 2011
Efa nivoaka ny filaharan'ireo mpifaninana hiatrika ny dingana antsasa-dalana amin'ny Tetikasan'ny Google Science Fair. Na dia nisokatra ho an'ireo tanora eo anelanelan'ny 13 sy 18 taona avy amin'izao tontolo izao aza izany, mahaliana ny manamarika fa i Etazonia, Singapore ary Inde no nahazo ny isa ambony indrindra tao anatin'ireo mpiatrika...
Japana27 Mey 2011
Roa volana izay no lasa taorian'ilay horohorontany sy tsunami tao Japana. Afaka manohy ny fiainany ara-dalàna ireo izay tsy tratran'ny horohorontany mivantana, olona eo amin'ny 110 000 no mbola mialokaloka anaty trano lay, araka ny fanombatomban'ny polisy. Ny tsy fananana fiainana manokana, ny fisarahana amin'ny fianakaviana sy ny namana mahazatra,...
Amerika Latina26 Mey 2011
Malezia: siokantsera momba ilay mpanondraka asidra
Malezia22 Mey 2011
Nirotsaka nanerana ny valan-tserasera tany Malezia izao hafatra izao andro maromaro lasa izay: @MelordeLicious: RT @DianaDanielleB: “@nourishamy: Acid splasher on the run,plate no : MAC1841 n WPV4963…ALERT!!! Spread this msg.. -“ @MelordeLicious:RT @DianaDanielleB: “@nourishamy: am-pandehanana [fiara na môtô] ny mpanondraka asidra, laharana MAC1841 n WPV4963…FANAIRANA!!! Aelezo ny hafatra.. -“ Saingy...
Malezia21 Mey 2011
Broney: Manaitra Ny Vahoaka Ilay Sarintsarim-pandrobàna
Broney21 Mey 2011
Ny herinandro lasa teo, ireo vaovao momba ny fandrobana tao anatina fiara fitateram-bahoaka tany Broney dia niparitaka haingana tao amin'ny twitter sy facebook. Teo noho eo dia naneho ny ahiahiny momba ny fandriana fahalemana eny amin'ireny toerana natao ho an'ny daholobe ireny ireo mponina any Broney. Avy eo dia fantatra...
Indonezia: Fanehoan-kevitry ny Bilaogy manoloana ny fahafatesan'i Bin Laden
Indonezia21 Mey 2011
Niely haingana toy ny afo mandoro ny vaovao mikasika fahafatesan’ ilay “mpanjakan'ny fampihorohoroana” Osama Bin Laden. Saingy tsy noraisina tamin-karavoana lehibe ny fahafatesan'i Bin Laden tao Indonezia, firenena be Miozolomana indrindra. Nampatsiahy ny vahoaka ny solontenan'ny governemanta fa fandresena ho an'i Etazonia ny fahafatesany, fa tsy ho an'i Indonezia. Hita fa...
Filipina17 Mey 2011
Nanangana bilaogy iray handraketana ny fiainany any am-ponja sy ny eritreriny ny mpanakanto Filipiana iray, mpanao gazety sy mafàna fo izay notazonin'ireo manampahefana ao Philippines am-ponja. Ny fianakaviany, ny namany, ireo mpanakanto mpiara-miasa aminy sy mpanoratra avy amin'ny fiarahamonina sivily koa dia nampiasa ny vohikala ho fanentanana ny amin'ny hamotsorana...